အီတလီမှာဘူတာရုံအနီးအကောင်းဆုံးဟိုတယ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ > အီတလီမှာဘူတာရုံအနီးအကောင်းဆုံးဟိုတယ်
အီတလီ, ဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတွေထဲက အားလပ်ရက်တွင် Destinations, ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်. ငွေရတတ်သောယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း, ဇိမ်ခံဟိုတယ်များ, ကမ္ဘာကျော်အစားအစာ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, သဘာဝကအလှတရား၏ဆိုဒ်များ ... ပြီးတော့စျေးဝယ်ရှိပါတယ်! ရထားအီတလီနိုင်ငံမှခရီးသွားလာ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအတှေ့အကွုံ. သင့်အနေအပေါငျးတို့သကိုခံစားရ လှပသောရှုခင်း လမ်းတစ်လျှောက်မယ့်အစားတစ်ဦးလေယာဉ်ထဲမှာချွတ် dozing. သင်သည်သင်၏ရှေးခယျြသောမြို့ကိုရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, များပြားလှရှိပါတယ် ပါသောနေရာများ ဆက်နေရန်. သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေ, ငါတို့သည်အချို့သောအလွန်အမင်း-rated ဟိုတယ်များဖွင့်ဝိုင်းင့် - သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦးမျှသာကျောက်ခဲတပစ် ဘူတာရုံ. ဤရွေ့ကားအီတလီမှာရထားဘူတာအနီးရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ်များမှာ.
အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကောင်းဆုံးဟိုတယ်များမှာ – Florence မှာ Firenze စန်တာမာရီယာ Novella ရထားဘူတာ
The Grand ဟိုတယ် Minerva ရုံစတုရန်းမီတာ 300 Florence ရဲ့စန်တာမာရီယာ Novella ရထားဘူတာမှ. ပြန်မှဒီအသမိုင်းဆိုင်ရာဟိုတယ်ရက်စွဲများ 19ကြိမ်မြောက် ရာစုနဲ့တစ်ဦးရှိပါတယ် ခေါင်မိုးပေါ် ၏သမိုင်းဝင်စင်တာအပေါ်စီးကျန်ကြွင်းသောအရပ် အီတလီနိုင်ငံ Renaissance မြို့, သုံးဘီး.
ဤသည်ဟိုတယ်အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားခရီးသွားများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ယဉျကြေးမှု, နှင့် အစာ. ဒါဟာအားလုံးအဓိကဆိုဒ်များကနေမိနစ်အနည်းငယ်ဖွင့်. သင်မှန်သင့်ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးအပြင်ဘက်ကို Santa မာရီယာ Novella တွေ့နိုင်ပါသည်, ရုံတစျခုကီလိုမီတာအတွင်း, သငျသညျကိုလညျးဖလောဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, Piazza della Signoria, တံတားအဟောင်း, နှင့်ပိတိ နန်းတော်.
အချို့စျေးဝယ်ရှာဖွေနေ စားရန်သို့မဟုတ်တစ်ကိုက်? San Lorenzo စျေးသို့ (သို့) Sant'Ambrogio စျေးသို့လမ်းလျှောက်။ Buca Maria သို့ Gelateria la Carraia သို့အစာစားရန်သေချာစွာသွားပါ။.
Verona Florence မှရထား
မီလန်အတွက်မီလန် Porta Garibaldi ရထားဘူတာ
ဖက်ရှင်မီလန်အတွက်ဂိမ်း၏အမည်ဖြစ်ပါသည် - ဒါရှိရာခေတ်မှီ Tocq ဟိုတယ်ထက်နေဖို့ပိုကောင်း? အဆိုပါဟိုတယ်ကိုအလယ်ပိုင်းမီလန်တွင်တည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျော်ကြားတဲ့မှတစ်ဆင့် Montenapoleone, Sforzesco ရဲတိုက်, နှင့် la Scala ပြဇာတ်ရုံ တစ်ဦး 2km အချင်းဝက်အတွင်းအားလုံးများမှာ, အဆိုပါမြင်ကွင်းများကိုအလွယ်တကူ walkable အောင်. အဆိုပါ Duomo မီလန်လည်းအနီးအနားမှာဖြစ်ပါတယ်, ဝေးမယ့်ကျော် 2km.
သင်ချင်ပါလိမ့်မယ်ဦးခေါင်းမှထုတ်ခံစားကြည့်ပါ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေက နာမည်ကြီး Corso လုပ်နည်းလမ္း, ရုံတည်ရှိသည် 100 ကွာမီတာ. ဒါပေါ့, Corso Como လည်းနေ့စည်ကားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် - နှင့်အတူ တင်ပါးဆုံရိုးဘား နှင့်နိုက်ကလပ်, ဒီ vibey လူကူးလမ်းလည်းမြင့်မားတဲ့ဖက်ရှင်စတိုးဆိုင်ဝါကြွားခြင်းနှင့် အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်စားသောက်ဆိုင်. စျေးဝယ်ပွုတျောမ? ငါတို့သည်သင်တို့အပြစ်မတင်ပါဘူး! Via Vincenzo Capelli လမ်းနှင့် Brera ခရိုင်တစ်ဦးအလည်အပတ် Give.
အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးအကောင်းဆုံးဟိုတယ် – Naples – ဗဟိုရထားဘူတာ
အီတလီရှိရထားဘူတာများအနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟိုတယ်သည် အဆိုပါ UNA ဟိုတယ်၌နာပိုလီ, နေပယ်လ်အတွက်ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိပြီးတစ်ခု authentication ပွနျလညျထူထောငျသမိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦး. ဟိုတယ်ဘားကျန်ကြွင်းမှာသောက်ပျော်မွေ့, သော Vesuvius မီးတောင်တစ်ခုအမြင်ရှိပါတယ်. သင်သည်ထိုမြင်ကွင်းကိုမှအနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးယူနိုင်ပါသည် တိုတောင်းသောရထားစီးနင်း ပေါင်ပေနှင့်တောင်ပေါ်မှာ Vesuvius ကြည့်ဖို့.
ဤမျှလောက်များစွာသောမယုံနိုင်စရာသမိုင်းဝင်သောအရပ်တို့ကိုမအနီးအနားမှာရှိပါတယ်, သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ဒါ Naples တစ်ပိုရှည်နေစေ. သင်နိုင်လိမ့်မည် Cathedral သို့လမ်းလျှောက်ပါ နေပယ်မြို့, စန်တာ Chiara, စန်း Gregorio Armeno, စန်း Lorenzo Maggiore, အမျိုးသားရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်, အဖြစ်သမိုင်းဝင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Duomo လမ်း. သငျသညျကိုပင်နာပိုလီ Sotterranea မှာမြို့အောက်မှာသွားနိုင်ပါတယ်.
ရောမမွို့ရှိရိုးမား Termini ရထားဘူတာ
လှပသော NH Collection Roma Palazzo Cinquecento သည်ရောမမြို့၏အဓိကမီးရထားဘူတာရုံအနီးတွင်တည်ရှိပြီးဥယျာဉ်များနှင့် Mura Serviane ၏ရှေးဟောင်းအပျက်အယွင်းများကိုကြည့်ရှု။ ကြယ် ၅ ပွင့်အလှတရားဖြစ်သည်. သငျသညျခြေလျင်ထာဝရမြို့ရှာဖွေစူးစမ်းတူသောခံစားရလျှင်, သငျသညျကံရောက်နေ. သင်တို့သည်ဤမျှဦးနိုင်ပါတယ် အများကြီးဆွဲဆောင်မှု ကွာ 2km ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာ: အဆိုပါ Coliseum, စပိန်ခြေလှမ်းများ, Trevi ရေပန်း, အမျိုးသားပြတိုက် ရောမ, Teatro dell'Opera di ရိုးမား, စန်တာမာရီယာ Maggiore, ဘုရား အ Santa Susanna, နှင့်စပိန်ခြေလှမ်းများ.
သင်တို့ရှိသမျှကြောင်းရှုခင်းများကြည့်ပြီးနောက်လည်းပင်ပန်းမသိရှိပါက, နေ့နှင့်စားသောက်ဆိုင်အားဖြင့်စျေးဝယ်ဝါကြွားသောမြို့တော်ရဲ့နာမည်ကျော်မှတစ်ဆင့် del Corso တစ်ဦးဘတ်စ်ကားပေါ်ခုန်, ညဉ့်အခါအရက်ဆိုင်များနှင့်ကလပ်များ. ငါတို့သည်သင်တို့အီတလီမှာရထားဘူတာအနီးရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ်မဆိုမှာသင့်ရဲ့နေထိုင်ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်သေချာနေ.
သငျသညျရှေ့တျော၌မဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖူး? ကျွန်တော်တို့ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကို tweeting အားဖြင့်သိပါစေ @SaveATrain! မေးခွန်းများရှိပါသလား? ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ တွင် SaveATrain.com သငျတို့သကာလအစဉ်အမြဲရထားဘူတာအနီးရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hotels-near-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ဘူတာရုံ	ရထားခရီးသွား	ခရီးသွား